Dharaaro Xusuustood Iyo 32 Sano Ka Hor Dagaalkii Buuraha Ee Xoogagii SNM Ay Ku Beegsadeen Ciidamadii Cadawga Siyaad Bare | Marsa News
Dharaaro Xusuustood Iyo 32 Sano Ka Hor Dagaalkii Buuraha Ee Xoogagii SNM Ay Ku Beegsadeen Ciidamadii Cadawga Siyaad Bare
December 1, 2017 - Written by editor marsan
Bishan oo kale, 32 sanno ka hor, ciidamaddii dhaqdhaqaaqa waddaniga Soomaaliyeed waxay duulaan balaadhan ku qaadeen dhulkii la odhan jiray gobolada waqooyi ee Jamhuuriyaddii Soomaalida. Haddaba dagaalkaasi siddeebuu u dhacay?
Goor habeenimo ah Ciidankii ugu horeeyey wuxuu ka duulay deegaanka Sheed Dheer,06.November.1984-kii, ciidankaas oo tiradiisu ahayd 174 Mujaahid, waxaana taliye ciidan u ahaa Mujaahid Cabdilaahi Askar Barkhad, taliye ku xigeena waxaa u ahaa Mujaahid Axmed Xasan Aadan (Wayso Cadde)., waxaanu ciidankaasi ka dagaal galay buuralayda Gobolka Awdal. Ciidankan oo ka dagaal galay deegaan ayna ku badnayn taageerada ururkii SNM, waxaa soo gaadhay dhimasho badan oo boqolkiiba konton ah, sababta dhimasho ama guuldarro ee ciidankan waxaa loo nisbeeyaa dhawr arrin oo ay ka mid ahayeen.
1. Muddo ayuu ciidanku ku diyaar garoobey halka uu ka soo kicitimay,markaa waxaa laga helay war sugan oo koobaya xaaladda guud ee ciidanka.
2. Maadaama oo warkooda oo dhamaystiran la hayo, si fiican ayaa loogu sii diyaar garoobay.
3. Waxaa laga sii fadhiistay meelihii biyaha lahaa, si ay u harraadaan.
4. Iyo qodobka ugu danbeeya oo ah, in ciidamadii kale ee SNM ee gudaha geli lahaa ay dib u dhaceen, taas oo keentay in la isugu tago Mujaahidiintan uu Cabdilaahi Askar hogaaminaayey, iyadoo dhimasho baddani soo gaadhay, haddana intii badnayd way soo badbaaday.
Duulaankiii Buuraha Shiikh. 16.November.1984.
Ciidankii labaad wuxuu guluf ka hinqiyay 16.November.1984-kii,jiidii uu ka dhacay dagaalkii Burco Duuray, waana guutadii cadawgu ka biqi jira ee Sayid Cali, waxaana hogaaminaayey Muj:Ibraahim Cabdilaahi Xuseen (Dhagaweyne), taliye ku xigaana waxaa u ahaa Muj.Maxamed Cali. Ciidankani wuxuu galay oo ka dagaalamay buuraha Golis ee Degmada shiikh, wuxuuna ku guuleystey in muddo ah, inay xidhaan laamiga Berbera iyo Burco u dhaxeeya, si kasta oo ay ciidankii Soomaliya isugu dayeen inay uga saaraana way uga saari kari waayeen, waxayna u geysteen khasaare aan lasoo koobi karin ciidankii Soomaaliya. iyadoo dhaawacooda iyo dhimashadoodu ay buux dhaafiyeen cusbitaalada Burco iyo Hargeysa. Ciidankan oo deegaanka uu ka dagaalamayo aqoon baddan u lahaa, waxay keentay in dhimashadoodu uu noqdo, mujaahid keliya oo la odhan jiray Xaaji, intoodii kale iyagoo badqaba guul balaadhana wata ayey fadhiisimaddii ay ka soo duuleen ku noqdeen.
Duulaankii Buuraha Meriya. 27.November.1984.
Guutadii la odhan jiray 1aad ee deganayd meesha la yidhaahdo Baalidhaye ayaa iyana waxay ruqaan satay 27.November.1984-kii, waxayna beegsadeen isla silsilada Golis siiba buurta Meriya ee ku taala waqooyi bare ee magaalada Burco. Ciidankan waxaa taliye u ahaa Muj;Maxamed Kaahin Axmed, waxaana taliye ku xigeen u ahaa Muj.Maxamed Cawed Baxooshe. Ciidamaddii Dawladdii Soomaaliya waxay isku dayeen inay mujaahidiintan jidka ku joojiyaan oo aanay u ogolaan inay buurta gaadhaan, lakiin taasi umay suurto gelin, ciidanka oo dhulka uu marayo iyo deegaanka uu ka dagaalamayo kala yaqaaney aawadeed, iyana waxay gaadheen Buurtii Meriye iyo nawaaxigeeda, halkaas oo uu in muddo ah dagaal balaadhani ku dhex mareeyey ciidamadii Soomaliya, iyagoo khasaare ba’an gaadhsiiyay ciidankii Soomaaliya ee xaqdarada ku dagaalameeyay, mar kale ayaa Cisbitaalka Burco, maydka iyo dhaawaca ciidamadii dooxatada ahaa ee Siyaad Barre, ay buux dhaafiyeen.
Ugu dambeyntiina ciidankan oo masaafo aad u dheer oo 300 oo km, gaadhaysa ka soo kicitimay, wuxuu ku guuleystey inuu dib u gaadho Baalidhaye, oo ahaa saldhigii ay markii horeba ka soo duuleen. Dhibta iyo naf hurida ay sameeyeen ciidamadaas SNM ee saddexda qaybood ahaa, waa mid ninkii joogay uun uu garan karo, sida nimankaasi muddo, iyagoo aan daawo wadan, oo cunto ku filan wadan, oo xitaa tikniko iyo baabuur aan wadani ay ugu badheedheen dagaaladaas, dusha sare ayay ka qolof dhaceen. Aniga Aabahay Muj.Yuusuf Axmed X.Aadan (Yuusuf dhakhtar) oo ahaa dhakhtarkii daaweeyay markii ay Baalidhaye ku soo noqdeen, mujaahidiintii Meriya galay, wuxuu ii sheegay “In maalintii ay Baalidhiye yimaadeen, Muj;Maxamed Kaahin iyo colkii la socday, in uu kabihii uu ka saaray uu soo raacay hilibkii cagahoodu!. “Waxaad moodeysey inay gubteen”ayuu yidhi. Wuxuu intaas ku daray “ileen waa niman xaq ku dagaalamayee, daawada ka dib dhawr maalmoodba hilibkii iyo duubkii ka dhacayba way ku soo noqdeen”.
Guuldaradaas ay Ciidamadii SNM, u geystey ciidankii Soomaaliya, waxay keentay inay shacabkii magaalooyinka waqooyi degenaa ka aarsadaan oo si naxariis darro ah u xasuuqaan, tusaale ahaan.
17.November.1984-kii, waxay magaalada Hargeysa , dil toogasho ah lagu fuliyey 37 qof oo aan waxba galabsan, oo wax garadkii magaalada ahaa.
19.November.1984-kii, waxaa magaalada Shiikh, dil toogasho ah lagu fuliyay 11 qof oo aan waxba galabsan oo labeentii magaalada ahayd.
20.December.1984-kii, waxaa magaalada Burco, dil toogasho ah lagu fuliyey 45 qof oo aan waxba galabsan oo labeentii iyo aqoonyahankii iyo odayaashii magaalada ahaa.
Aarsi naxariis darro ah ayaa meeshaas ka dhacay!.
Xigasho. Buuga Dhiigii Geesiga,